tadiavo ny fahasamihafana eo amin'ny fiarahana amin'ny vehivavy Amerikana sy ny italiana girl - Ny Lahatsary Amin'ny Chat Italia
tadiavo ny fahasamihafana eo amin'ny fiarahana amin'ny vehivavy Amerikana sy ny italiana girl
Toy izany koa ny tovovavy italiana, marina
Ny vehivavy Amerikana manome anao ny isa an-tariby dia midika hoe izy no mandinika mivoaka miaraka aminaoIzany dia t ela mba hahazo rehefa afaka izany rehetra izany, dia ny maro fa tsy ny peratra mariazy.
Amin'ny teny italiana tovovavy, ianao dia miasa mafy vao mba mahazo ny isa an-tariby.
Hatrany, dia te-hanana hevitra ny fomba mafy ianao no handeha hiasa mba hahazoana ny sainy.
Amin'ny teny italiana hoy izahay hoe (adika): Izy izay manomboka tsara dia nisasaka atao. Italiana tovovavy mety tsy hanontany anareo nivoaka voalohany.
Mila manontany azy nivoaka voalohany, foana.
Na dia ny faharoa dia ny fotoana. Ary ny fotoana fahatelo. Ny tovovavy malagasy dia t-be ho any an-chase izy amin'ny ankapobeny dia t handositra ho ela loatra, na lavitra loatra. Raha nilaza izy fa tsy afaka ny handeha ianao rehefa mangataka azy avy ho amin'ny daty, izany angamba no marina. Manizingizina be loatra dia mety ho tsy mendrika. Italiana zazavavy foana ny te-hahafantatra ny fomba maro vonona ny hiasa ho azy.
Raha ny marina, handray ny mety izy
Ny zava-misy fa hoy izy: tsy misy ny fotoana voalohany dia t midika hoe izy dia tsy afaka ny hivoaka na dia t te. Izy no mizaha toetra anareo. Ankehitriny, ny fahatelo ny fotoana hoy izy: tsia, izy dia midika izany (ary tsy t manantitrantitra). Fa aza t maka ny voalohany tsy ho toy ny tsy mahomby. Izany ny fanamby, izany fanekena izany. American ankizivavy ny mitandrina ny fomba fiakanjo, fa ry zalahy tsy dia be. Izy ireo dia matetika heverina ho toy ny mitady azo ekena izy ireo rehefa mihaona ny kely indrindra fenitra. Italiana ry zalahy maka ny fotoana ihany mba ho vonona amin'ny maha-Amerikana vavy. Amin'ny lafiny iray, lamaody, haja, ary ny tsirony dia miorim-paka tsara ao ny italiana kolontsaina, ka italiana ry zalahy aza t tsikaritsika izy ity handeha ho azy ireo. Fa any Italia, indrindra ho daty voalohany, toa tena count be dia be. Ny Amerikana, ny ankizivavy dia afaka maka fotoana, miala avy amin'ny namany mba hiresaka aminao amin'ny alina avy. Mety na dia kady ny namany ho ny antsasaky ny alina, arakaraka ny fomba liana amin'ny tsy izy. Italiana ny tovovavy no tsy handao ny namany fotsiny. Noho izany, na dia manana namana izany aminareo rehetra maromaro, na mila hafahafa maro, izy irery na, ka dia afaka mandany fotoana miaraka aminao satria izy ravina namany roa miaraka. American ny tovovavy dia betsaka ny tsy ampiasaina ho ry zalahy ho tompokovavy fanokafana varavarana ho an'ny vehivavy, miandry azy mba hipetraka eo anatrehanao mipetraka, sns. Koa, Amerikana matetika ireo tovovavy no manolotra ny hizara ilay volavolan-dalàna taorian'ny daty vitsivitsy. Ao Italia, dia handeha ho be intsony aloha ny zazavavy mandoa noho ny zavatra rehefa mivoaka ho an'ny kafe misotro ny sakafo hariva. Italiana ankizivavy manantena, sy ny fangatahana, herim-po. Tsy diso izany American ny tovovavy toy ny fitia, fa ry zareo be mivantana kokoa. Tsara mpanadala dia foana mahafinaritra, fa angamba izy ireo koa tsy nampiasa izany. Fa italiana ny ankizivavy, dia tsy izany ihany no serizy eo an-tampony ny mofo (toy izahay miteny hoe any Italia), izany dia kanto ianao dia tsy maintsy mahafehy raha te daty italiana zazavavy.
Anarana Mampiaraka toerana
Anunsio di e servisio di Its di estudio uní
amin'ny chat roulette tsiroaroa maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana izay mba nahalala an-tserasera ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat taona tena matotra ny fiarahana amin'ny chat roulette plus miaraka amin'ny ankizivavy amin'ny chat roulette aterineto amin'ny finday ny fomba hitsena ny tovovavy amin'ny chat roulette zazavavy an-tserasera ho maimaim-poana